FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA NEAPOLITAN MASTIFF - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Neapolitan Mastiff
Phantom Neapolitan Mastiff olon-dehibe
Lisitry ny Neapolitan Mastiff Mix Dogs
Mastino - Plastika Mastini
Ny Neapolitan Mastiff dia alika matotra sy matanjaka. Ny tenan'ity alika goavam-be sy mahitsizoro ity dia manana ketrona sy mivalona mihantona eo an-doha ary misy savony lehibe dia lehibe. Ny loha malalaka sy fisaka dia lehibe raha oharina amin'ny sisa amin'ny vatana. Ny molotra dia 1/3 ny halavan'ny loha ary malalaka toy ny lava amin'ny fijanonana voafaritra tsara. Ny orona lehibe dia manana vavorona misokatra sy loko mifandrindra amin'ny palitao. Mihaona amin'ny hety, pince na manaikitra maivana ambany ny nify. Ny maso lalim-paka dia saika rakotry ny saron-drindrina ambony ary tonga amandy sy volontany, miankina amin'ny lokon'ny palitao. Manomboka fiainana ny alika kely maso manga , izay manamaizina avy eo. Ny sofina dia mety hety na avela voajanahary. Tompona maro no miala amin'ny docking sy cropping, aleony ny fijery voajanahary, satria maharary ny alika. Ny rambony dia entina mahitsy ary miolakolaka amin'ny lamosina. Amin'ny alika aseho amin'ny AKC dia tsy esorina ireo dewclaw anoloana. Ny tongotra boribory dia lehibe misy rantsantongony voakolokolo tsara. Ny palitao mahitsy, matevina ary fohy dia tonga fotsy, manga, mainty, sôkôla, mahoniana ary mangatsiaka, indraindray misy marika boribory sy fotsy. Fotsy kely avela amin'ny tratra sy ny rantsantongony. Tsy tokony hisy fotsy eo amin'ny tarehy. Tsy fahita firy ny alika sôkôla.
Ny Neapolitan Mastiff dia tsy karazany ho an'ny rehetra. Ity karazana ity dia toa somary mampatahotra, nefa kosa tia, milamina, milamina ary be fitiavana. Ankafizin'izy ireo ny fianakaviany sy ny namany. Ity karazany ity dia a drooler mavesatra , indrindra amin'ny andro mafana na aorian'ny fisotroana. Ny lehilahy dia mety midina bebe kokoa noho ny vehivavy. Tena dodona amin'ny baikon'ny tompony izy ireo. Manan-tsaina, miaro be, be herim-po, matotra ary malemy paika. Mangina amin'ny ankapobeny, matetika izy ireo no mitroka rehefa ilaina. Izy ireo dia azo atokisana amin'ny olon-tsy fantatra mifanerasera amin'izy ireo amin'ny olona, ​​toerana, feo ary biby. Ireo alika ireo dia matetika be fitiavana amin'ny ankizy, raha toa ka mahay mampiseho ny fahaiza-mitarika ny ankizy. Neo afaka mifanaraka tsara biby fiompy tsy kaninina raha notezaina niaraka tamin'izy ireo avy tamin'ny alika kely sy / na nifaneraserana ara-dalàna. Fanofanana momba ny fankatoavana dia tena zava-dehibe. Ampianaro izy ireo hiondrika amin'ny firaka ary hiditra sy hivoahan'ny varavarana sy ny vavahady aorian'ny olombelona. Mila karazany ity karazana ity tompony manjaka izay mahatakatra sy mahay mifehy azy ireo tsara. Izy ireo no ho mora indrindra raha apetraka izany raha mbola alika alika ny alika, fa mbola azo atao ny mifampiresaka amin'ny olon-dehibe Neo fa ny olombelona no miandraikitra. Tokony hampianarina ny fomba hahatongavana ho mpitarika entana ny ankizy. Araraoty ny fiaraha-miasa amin'ity karazany ity raha mbola tanora izy ireo. Alika mpiambina voajanahary ity ary tsy ilaina ny fampiofanana momba ny fiarovana. Tsy azonao atao ny mamoaka ny mpiambina amin'ny alika, na toy inona na toy inona izy ireo. Raha tsapan'izy ireo fa misy fandrahonana ho an'ny trano dia hanao fihetsiketsehana izy ireo raha tsy eo ny tompony ary lazao azy ireo fa milamina ny zava-drehetra. Hamarino tsara fa mifanaraka amin'ny fomba fiasa ianao ary aza miverimberina ny baiko izay tsy nankatoavin'ny alika. Raha tsy mihaino izy ireo dia andramo ny fomba hafa, alao antoka fa matoky tena ianao. Tsy hihaino tompona mpandefitra i Neos. Tsy alika ho an'ny vao manomboka ireo, fa mihoapampana kosa ny mamaritra azy ireo ho sarotra amin'ny fifandraisany amin'ny hafa. Mpitantana milamina miaraka amin'ny fitarihana natoraly dia hahatratra ny vokatra tsara indrindra. Miaraka amin'ny fiofanana matotra sy tompona za-draharaha, manana fahefana, ny Neapolitan Mastiff dia mety ho biby fiompy mahafinaritra. Ity karazana ity dia manana fandeferana amin'ny fanaintainana mafy. Neos izay tsy manana tompona matanjaka, matoky tena ary tsy miovaova izay manome azy ireo isan'andro mandeha tongotra ny famoahana fanatanjahan-tena sy ara-batana dia ho tonga an-tsitrapo , miaro tafahoatra ary alika mahery setra. Rehefa manitsy an'io alika io dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny haavon'ny alika ny fanitsiana an'ny tompony, ary tokony ho marina ny fotoana fanitsiana azy.
shih tzu yorkie mifangaro sary
Haavony: Lehilahy 26 - 30 santimetatra (65 - 75 cm) Vehivavy 24 - 28 santimetatra (60 - 70 cm)
Lanja: Mahatratra 165 pounds (74 kg)
Ny Neapolitans lahy lehibe indrindra dia mety ho 90 kilao (90 kg)
Mora amin'ny maso serizy , dysplasia hip, bloat , pano-ostiosis (fanaintainana iraisana amin'ny fitomboana dia mety hitranga amin'ny 4-18 volana ary matetika mandeha irery). Matetika ny pups dia teraka amin'ny alàlan'ny fizarana caesarian.
Ny Neo dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Tsy dia mihetsika intsony izy io ao an-trano ary hisy tokontany kely. Mitandrema amin'ny toetr'andro mafana mba hanomezana alokaloka, rano ary toerana mangatsiaka hatory.
Mila manao fanatanjahan-tena be dia be ny Mastiff Neapolitan olon-dehibe. Tokony horaisina isan'andro, mandeha lavitra farafahakeliny indroa isan'andro. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Ampianaro ny alikanao hiditra sy hivoaka ny varavarana sy vavahady rehetra aorian'ny olombelona.
Fohy, hatramin'ny 10 taona
Ankizy 6 ka hatramin'ny 12 eo ho eo
anglisy taloha bulldog pitbull mix
Ireo alika goavambe sy fohy volo ireo dia mora karakaraina. Esory amin'ny volo vita amin'ny goma ny volo maty sy volo. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Ny mastiff eropeana rehetra dia avy amin'ny Tibetan Mastiff , ny mpikambana taloha indrindra amin'ny karazana canine. Ny mastiff aziatika voalohany dia angamba nentin'i Alexander the Great tany India avy tany India tamin'ny taona 300 talohan'i JK. Ny Grika dia nampiditra ny alika tamin'ny Romana, izay nandray azy ireo tamin-jotom-po ary nampiasa azy ireo tamin'ny fiaramanidina sirkus. Ny teny hoe 'mastiff' dia avy amin'ny teny latina hoe 'masssivus', izay midika hoe goavambe. Ny manam-pahaizana anglisy kosa dia manana teoria hafa. Nanamafy izy ireo fa ny mastiff dia nentin'ny Fenisianina tany Angletera tamin'ny taona 500 talohan'i JK ary niparitaka avy teo ka hatrany amin'ny eran'i Eropa. Na ahoana na ahoana, ny Neapolitan Mastiff dia razamben'ny romana mivantana Molossus . Nandritra ny fotoana nanjary ilay karazany lany tamingana nanerana an'i Eropa sisa dia mbola velona ihany izy io tany Campania, na eo aza ny loza ateraky ny toetrandro sy ny ady. Azonao atao ny milaza fa ny Neapolitan Mastiff dia efa nisy tany Campania nandritra ny roa arivo taona, na dia tsy nekena tamin'ny fomba ofisialy hatramin'ny 1946, ary ny fenitra napetraka dia tsy napetraka hatramin'ny 1949. Ny Neapolitan Mastiff dia novolavolaina hampiasaina amin'ny ady sy amin'ny kianja romana mihosin-dra solomaso. Androany, ity karazana matanjaka ity dia manana laza mendrika azy ho alika mpiambina matanjaka. Neos dia nampiasain'ny polisy italiana sy ny tafika ary ny tantsaha, ny orinasam-pandraharahana ary ny tompona fananana hiarovana ny olona sy ny fananany. Na dia naseho voalohany tany Italia tamin'ny 1946 aza ny Neapolitan Mastiff, dia mbola tsy fahita firy any Etazonia ny karazany. Ny Neapolitan Mastiff dia neken'ny AKC tamin'ny 2004.
USNMC = Etazonia Neapolitan Mastiff Club
Sary natolotry ny Maximum Mastiff
shar pei lab mix dog
Ch. Newworldmastino's Esperanza AKA Chiquita amin'ny faha-4 taonany— 'Chiquita no hany Neapolitan Mastiff vehivavy nahazo fandresena tsara indrindra tamin'ny teratany Eukanuba nokapohiny lahy sy vavy tamin'ny teratany Eukanuba 2010.'
fahaverezan'ny pigment amin'ny orona alika
Alika kely Neapolitan Mastiff roa — Niakatra i Posh ary nandry i Argus.
Achilles the Neapolitan Mastiff amin'ny faha-5 taonany— 'Achilles dia karazana asa neo an-tsekoly taloha. 150 lbs izy. ary mirefy 29 santimetatra eo an-tsoroka. Matanjaka sy miaro be izy. Tena atletika ho an'ny Neo izy, ary tsy ketrona be loatra. Voaofana amin'ny asa fiarovana izy. Tiany ny miasa dia mamela azy hahatsapa ho toy ny vola an-tapitrisany foana. Teraka noho izany izy. Izy no Neo mavitrika indrindra nifanena tamiko, ary finday be. Faly be aho miaraka aminy fa tena izy no tadiaviko ao amin'ny Neo. Manantena aho fa maro ny mpiompy manomboka mifantoka amin'ny Neapolitan Mastiff miasa, ary betsaka lavitra ny karazana mampalahelo loatra. Manantena aho fa i Achilles dia afaka manaporofo amin'ireo olona mino fa tsy misy hery sisa tavela ao Neo, fa mbola misy santionany miasa tsara any. ' Sary natolotry ny Midgard Mastiff
Achilles ilay karazana asa an-tsekoly Neapolitan Mastiff tamin'ny faha-5 taonany, sary nahazoana alalana avy amin'i Midgard Mastiff
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Neapolitan Mastiff
Sary Neapolitan Mastiff 1
Sary Neapolitan Mastiff 2
Sary Neapolitan Mastiff 3
Fandrarana: Fomba ratsy
Zavatra bulldog miharo mpanao ady totohondry
mpanao ady totohondry miharo volamena retriever
sary volamena retriever mpiandry ondry alemaina Mix
asehoy ahy ny sarin'ny alika beagle
feno volamena efa lehibe Cocker retriever